मेरो जन्म २०४६ साल भाद्र ११ गते नुवाकोट जिल्लाको अति सुन्दर र रमणिय तलाखु गा.वि. स. वार्ड न ३ मा भएको थियो ।
जब मान्छेले यस धर्तीमा पाईला टेक्छ, त्यसपछि उसको आमाको स्याहार सुसार पालनपोषण पश्चात समयको परिवर्तन सँगै उसको शारिरीक अनि बौद्धिक बृद्धि हुदै जान्छ। उसले आफ्नो आगामी जीवनमा विभिन्न राम्रा राम्रा सपनाहरु देखेका हुन्छ, अनि आफ्ना जीवनका बारेमा कल्पना गरेका हुन्छ। तर सबैको पूरा भने भएको हुदैन। यस्तै म पनि जिन्दगीमा बेतालको हिडाई सङ्गै आज याहाँ सम्म आईसकेको छु ।
थाहै नपाइ आज म पनि २३ औ वशन्त बाट टाढिसकेका छन्। जीवनका विभिन्न उत्तारचढावहरुमा म कयौ पटक हाँसेको छु अनि रोएको पनि छु। चाहना एकातिर अनि यथार्थ अर्कोतिर, यस्तै यस्तै माझे धारहरुमा म धेरै पटक झस्केको छु अनि तर्सिएको छु। तर पनि किन किन म आफ्नो जीवन लम्ब्याउने प्रयासमा छु ।
अनि कहिले कठोर कठोर समयका जन्जिरहरुले बाँधिएर बाँच्नु पर्दा भित्र भित्रै उकुस मुकुस भइ आफुलाई एक मरेतुल्य महशुष पनि गरेको छु। साँच्चै जीवन विचित्रकै हुदो रहेछ। कहिले आफूले जिन्दगीलाई डोराईन्छ त कहिले उल्टै आफूलाई यो जिन्दगीले डोर्याएर लैजान्छ। जीवन एक संघर्ष हो ।
यो कुरा सत्य रहेछ, सायद त्यसैले होला म पनि आफ्नो जीवन संघर्ष बाट टाढिन सक्दिन। मैले आफ्नो जीवन संघर्षलाई युद्धको उपमा दिएको छु। जहाँ हार र जीतको सवाल त हुन्छ नै तर हार्ने नियत लिएर त कोही पनि युद्धमा सहभागी हुदैन। अनि जीत नै हुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी हुदैन।
समयको निष्ठुरी परिश्थितिलाई आखिर कसले पो नकार्न सक्छ र। किन कि यो समय कसैको पनि वशमा हुदैन। त्यसैले नचाहेको मोडमा पुग्नुपर्ने अवस्थाहरु त सायद एउटा जिन्दगीको प्रक्रियानै हो।
यस्तै समयको परिवर्तन अनि जिन्दगीको दौरान सँगै केहि सपना या केहि बाध्यातालाई अंगाल्दै आफ्नो घर ,गाउ छोडि परदेशी जीवन बिताइरहेको छु ।
आज यहा छु त भोलि कहाँ पुग्नेछ र कहाँ गएर यो जिन्दगीको अन्त्य हुनेछ त्यो त कसैलाई पनि थाहा हुदैन।
मलाई फेसबुक मा पाउन तल क्लिक गर्नुहोस...
Skype : volimte09
Hotmail : dhan.btmang@hotmail.com
Gmail : dhan1989827@gmail.com
Mobile: +977 9849 956061(Nepal)-NTC
+971 050 2669761(Dubai)-etisalat
+971 055 4764066(Dubai)-du